Bilaogera Egiptiana Anankiray Nanome Ny Heviny Momba ny Lahatsoratr’i Robert Fisk · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Desambra 2017 5:03 GMT
Nanoratra an'ito manaraka ito momban'ny lahatsoratr'i Robert Fisk ny bilaogera Perwin Ali, ho an'ny The Independent, malemy sy feno kolikoly loatra tsy afaka miasa ny Fanjakana ratsy ao Ejipta, :
Mihevitra aho fa ny lahatsoratr'i Fisk no ohatra vao haingana indrindra mampiseho fa afaka lasa sady badobado no sady mpivarotra ny rehetra … na dia izay loharanom-baovao faran'izay mendrin-kaja be aza. Mampiseho izany fa tsy afaka ny hanaraka sy/na hiray hevitra aman'olona an-jambany fotsiny na amin'ny zavatra isika amin'ny fotoana rehetra. Tsy maintsy anontaniana foana ny zavatra rehetra, ary tsy afa-tsy isika ihany no hieritreritra ho an'ny tenantsika.
Ankehitriny, na tsy manana afa-tsy fanajana ho an'i Robert Fisk aza aho, tsy afaka ny tsy hahita ny teniny, na dia marina aza, ho tsy misy idirany… na fara-faharatsiny mba nampiany resaka momba izay mitranga ao Ejipta sy ireo Ejiptianina, ankoatry ny “[fandrodanana] ny fototra ara-toekaren'i Ejipta ” noho ny fahasorenana nataony an'ireo lazaina hoe mpiaradia aminy. Maninona no tsy lazainy fa handeha irery i Ejipta amin'ny ady amin'ireo Israelianina, Amerikanina, Britanika ary ireo andiana tafika miafina hafa, raha nosokofany tokoa ny làlana eo Rafah? Ary miady amin'izy ireo eo amin'ny taniny, ilay Sinay izay tsiriritin'ny rehetra? Maninona no tsy hazavainy fa hanome fanohanana mafy kokoa ho an'i Israely ao Gaza ny fisokafan'i Rafah raha manomboka miala manao andiany maro ny Palestiniana?
Tsipihany ihany koa ny ampahan-dahatsoratra iray ahitana an'i Fisk miala ny fotokevitra, sady nanoratra:
Mitovy amin'ny lahatsoratra badobado fa tsy tena fanombanana ny krizin'i Gaza sy ny fiantraikany ao Ejipta, satria samy miezaka ny hanao an'i Ejipta ho lohahevitra ao anatin'ity loza ity, raha mbola halaza ho an'izany koa izy ity. Ny tiako ho tenenina dia hoe nahavita nanindry ny tsy fahampiana ao amin'ny fanjakana izy, izay fantatsika rehetra tsara ankehitriny, saingy maninona izy no miresaka fanolanana any am-ponja sy dokotera tsy mitandrina? Inona no idiran'izany amin'izay misy amin'izao fotoana izao? Tsy maintsy izany ve no resahiny izao?
Avy nahita ny eritreritro momban'io lahatsoratra io, nisy namako iray nanontany ahy tamim-pahagagàna raha tsy mino aho fa feno kolikoly i Ejipta ary tena kolikoly lalina. Ilay karazana kolikoly izay manosika tanora maro hanaiky ny mety ho fahafatesana any an-dranomasina mba hialàna ny eto an-toerana fotsiny. Araka izany, nanazava taminy aho hoe tsy miteny hoe diso izany, mifanohitra amin'izany mihitsy ny teniko. Marina izany.. tena marina. Fa tena tsy misy idirany amin'ilay resaka izy eto.
Ny kajy nataon'i Fisk momba ny haavon'ny kolikoly ao Ejipta dia tsy izay tokony noresahany eto raha tena tiany tokoa ny hiresaka mazava tsara ny heveriny ho anjara tsy efan'i Ejipta ao anatin'izany rehetra irany. Mihevitra aho fa mampiasa ny fombany efa lany andro izy mamoka ny taratasiny taloha voasokajy ho “ohatranà kolikoly ao Ejipta”, toy ny famenoana toeran-javatra izay mivandravandra fa laviny ny hijery azy araka ny tokony ho izy.
Ho famaranana ny lahatsorany, nomeny torohevitra i Fisk :
Afaka nandray zavatra toy ilay fifanarahana momban'ny entona notazonina miaraka amin'i Israely izy raha tena te-haka ohatra mampivoatra. Manandanja kokoa izay noho ireo hevitra mazàna mampitolagaga izay nampiasainy. Averina ihany fa tsy mahamenatra ny hoe “ny lafiny ivelany ara-pivavahana izay ahitana fa voafafa ny dikan'ny Silamo manoloana ny fanehoana azy ara-batana.”, izay fehezanteny tsy azoko antoka ho mifanentana amin'ny zavabita lazaina fa maharikororiko nataon'i Ejipta hatramin'izao. Angamba afaka hazavainareo amiko ilay lahatsoratra rehefa voavakinareo.
Azo antoka tsara mihitsy fa afaka manao tsara lavitra i Fisk mba tsy hitanila, tsy miangatra ary hahay mandalina.